Indlu yokwenyani ye-atmospheric ene-sauna yabucala iGroningen
Indlu yokwenyani evaliweyo egcwele umoya kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Imigangatho yokhuni, ikhitshi yanamhlanje, i-sauna yangasese kwigumbi lokuhlambela kunye ne-2 yokulala kabini kumgangatho ophantsi kunye neebhedi ezigqwesileyo zibonelela ngomoya kunye nokunethezeka.
Igumbi lokuhlala elibanzi elinesofa yaseChesterfield ephangaleleyo ijonge eBoterdiep.
I-Onderdendam yilali entle eyi-12 km ukusuka kwisixeko saseGroningen kwaye inedolophu ekhuselweyo.
Iphenyane lethu labantu aba-2 baseKhanada kunye neebhayisekile zethu ezi-3 zinokuqeshwa ngexabiso elifanelekileyo.
Yonwabela uxolo, indawo, i-sauna, (yokomelela) i-attic kwaye ngokuqinisekileyo iindawo ezisingqongileyo ezintle apho kukho into eninzi yokwenza.
Akukho gadi, kodwa xa imozulu intle ungahlala kwijethi phambi kwendlu eBoterdiep. Kukho ibhentshi phambi kwendlu onokuthi uyibeke elangeni ngasemanzini okanye ecaleni kwendlu emthunzini. Indlela ephambi kwendlu izolile kwaye inendlela enye, amanzi alungele ukuqubha!
Ilali ngokwayo ingumtsalane kunye nebhulorho yayo, i-marina, ihlathi lase-Onderdendamster kunye neendlela ezininzi ezintle zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisikile kule ndawo.
Unokuhamba ngephenyane apho: Iphenyane laseCanada + imephu yokuhamba ngenqanawa ekhoyo ngokuhamba phambi kwendlu!
Indawo yokutywina i-Pieterburen yi-15 km, i-Lauwersoog kunye ne-ferry eya e-Schiermonnikoog yi-30 km, idolophu yaseGroningen eneendawo zayo ezininzi, iimyuziyam kunye ne-terraces epholileyo yi-12 km, i-Thermen Bad Nieuweschans eneendawo zokuhlambela ezishushu kunye ne-sauna yi-60 km.
Sisoloko sifumaneka kwimibuzo ngefowuni, iapp okanye i-imeyile.